Qabridahare: Maxaabiis Rasaas Boolisku Riday u Dhintay iyo Booliskii Xabada Lahaa oo Xidhan – Rasaasa News
Jan 18, 2011 ethiopia, Ogaden, ONLF, Qabridahare: Maxaabiis Rasaas Boolisku Riday u Dhintay iyo Booliskii Xabada Lahaa oo Xidhan
Qabridahare, Jan 18, 2011 [ras] – Maxaabiis isku dayday in ay ka baxsato xabsiga magaalada Qabridahare oo ku dhintay rasaasa ay Boolisku ku rideen, si loo qabto iyo xubnihii Booliska ee xabada lahaa oo xidhan.
Maalintii Sabtiga ahayd Jan 15, 2011 gabal dhicii, xili ay cashaynayaan maxaabista ku jirta xabsiga magaalada Qabridahare, ayaa waxaa isku dayey in ay ka baxsadaan xabsiga labo wiil, ka dibna Booliska ayaa rasaas ku riday ay islahaayeen dhaawaca si loo qabto, nasiib daro meel halisa ayey labada wiilba kaga dhacday wayna dhinteen.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa la qabtay dhawr nin oo Booliska ah, kuwaasi oo lahaa rasaasata ay labada marxuun u dhinteen. Baadhid ka dib waxaa yeeshay xabada hal nin oo Boolis ah, kaas oo hada xidhan. Kolka ay ku cadaato in uu xabada lahaa waxaa la marindoonaa ciqaabta uu mutaysto askarigaasi xabada lahaa.
Ciidanka Booliska ee IDDS, ayaan lahayn tababar sharciyeed oo ku filin, arintaasi oo Booliska ku keenta in ay dambiyo ku galaan ay ciqaab ku mutaystaan. Magaalada Jijiga ayaa sanadkii hore uu nin ka mid ah Booliska Kontroolka Jijiga xabad ku furay gaadhi magaalada sii galyey dabadeedna ay ku dhimatay gabadh haysatay dhalashada dalka Ingriiska.
Labada nin ee la dilay ayaa waxay ku kala xukunaayeen xukunaayeen laba sano iyo saddex sano oo xadhig, dambiyada ay galeen ee lagu xukumay ma ayna ahayn mid siyaasadeed.
Labada marxuun ee la dilay ayaa magacyadooda la odhan jiray Cabdirisaaq iyo Suubaan, oo labadooduba ka soo jeeday gabalka Qoraxeey.